Dowladda Soomaaliya doonyo ma u diri kartaa dekedaha Al-Mukalla & Al-Mukhā ee Yemen? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladda Soomaaliya doonyo ma u diri kartaa dekedaha Al-Mukalla & Al-Mukhā ee Yemen?
Mareeg.com: Dalka Yemen oo ay muddo ka socdaan dagaallo sokeeye iyo kuwa shisheeye ku lug leeyahay waxaa horay ugu noolaan jiray Soomaali fabadan oo halkaas u qaxay markii Soomaaliya burburtay sanadkii 1991-kii.
Dagaalka Yemen ayaa markale Soomaalidii ku noolaa Yemen dib usoo qixiyey, waxaana todobaadyadii lasoo dhaafay Soomaali badan kasoo degayeen dekedaha magaalooyinka Boosaaso iyo Berbera.
Soomaalida ku sugnaa Yemen waxey badankood ahaayeen dad sabool ah oo ku nool xerooyin qaxooti oo UN maamusho, markii colaaddi qaraxday waxey intooda badan waayeen cid ku kaalmeysa sidii ay meesha uga carari lahaayeen.
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer sheegtay iney dalka Yemen u direyso diyaarado iyo maraakiib qaxootiga halkaas kasoo daabulo, lkn shalay ayaa diyaarad keentay dad aan badneyn waxaa dowladdu sheegatay iney kasoo qaadday Yemen.
Soomaalida ugu badan ee kasoo cararaya dalka Yemen ayaa ku sugan dekedaha Al Mukalla ee Xadramut iyo Al-Mukhā ee Taciz. Waxey la’yihiin qaar badan oo ka mid ah lacag aya ku raacaan doonyaha xamuulka ah ee Berbera ama Boosaaso u daabula dadka qaxaya.
Su’aashu waxey tahay dowladda Soomaaliya doonyo ma u diri kartaa dekedaha Al-Mukalla iyo Al-Mukhā ee dalka Yemen?
Jawaabtu waa maya, ee maxey tahay sababtu? Labadan dekedood waxaa maamula labo kooxood oo kala duwan oo mid kasta cadaawad kala dhaxeyso dowladda Soomaaliya.
Dekedda Al-Mukalla ee Xadramut waxaa maamulka Ururuka Alqaacidda ee Jaziiradda Carabta, sidaas darteed ma tegi karto doon ay dirtay dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Waxaa halkaas taga doonyo ay leeyihiin dad Soomaali ah, kuwaasoo qofkii lacag heysta soo qaada kana dejiya Boosaaso.
Dekedda Al-Mukhā ee Taciz, waxaa maamulka Jabhadda Xuthiyiinta ee qabsaday inta badan Yemen, meeshana ka saaray dowladdii madaxweyne Cabdi Rabbuh Mansuur Haadi.
Sida la ogyahay, Dowladda Soomaaliya ayaa si cad u taagreertay weerradan xagga cirka ah ee uu hogaaminayo Sacuudi Carabiya ee lagu qaadayo Xuuthiyiinta Yemen, taasina waxey abuurtay in Xuuthigu la colloobaan dowladda Soomaaliya.
Dekedda Al-Mukhā waxaa doonyaha qaxootiga ka qaada ku xertaan dekedaha Berbera iyo Jabuuti, iyadoo doonyahaasi yihiin kuwa si gaar ah loo leeyahay.
Maadaama labadaas dekedood ee Soomaalida qaxootiga ah doonyaha kasoo raacaan ay maamulaan labo qolo oo la dagaalsan dowladda Soomaaliya, lagama soo dhameynayo doonyo ay dirtay dowladda Federaalka ah.
Xitaa wey adagtahay in doonyo lacag ka qaatay dowladda Soomaaliya ay tagaan halkaas, maadaama ay ka cabsanayaan in loo beegsdo magaca dowladda federaalka ah.
Si kastaba, dadka Soomaalida ah ee ku sugan dalka Yemen ayaa u baahan kaalmo ballaaran, si ay uga soo cararaan colaadda ka taagan dalkaas.
Daawo sida Hargeysa looga xusay maalin aan la isla wada aqoonsaneyn
Baydhabo: Dil toogasho ah oo lagu fuliyey nin ka tirsanaa Alshabaab